Vaovao Mafana · Marsa, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Marsa, 2011
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Marsa, 2011
Madagasikara: resaka taorian'ny nijoroan'ny governemanta vaovao
Afrika Mainty 28 Marsa 2011
Ny mpamaham-bolongana Thierry Andriamirado no nanome ny lisitr'ireo mpikambana vaovao ao amin'ny governemanta fao najoro indray eto Madagasikara [fr] araka izay nanononana azy tao amin'ny radiom-pirenena. Ny mpamaham-bolongana politika Ndimby kosa nanome ny famelabelarana momba ny firafitr'ity lazaina ho governemantan'ny fampiraisam-pirenena ity sy ny mety hisian'ny faneken'ny fiarahamonina iraisampirenena ny fitondram-panjakana...
Koety: Lasa alina ny andro noho ny tafiotram-pasika
Nisy tafio-drivotra arahina fasika lehibe nandrakotra an'i Koety nandritra ny minitra maro tamin'ity atoandro ity. Niaraka tamin'ny Kamera, nanome topi-maso ny zava-niainany ireo mpampiasa aterineto Koety satria dia nivadika ho alina ny andro. Ireto misy toraka tao amin'ny YouTube, Twitter ary Facebook.
Syria: Famonoan'olona maro, nanjavona ny Bilaogera sy Mpanao gazety
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Marsa 2011
Mbola mitohy ny fifandonan'ireo mpanao fihetsiketsehana ao Daraa, Syria . Vao maraim-be, tafika manokana no namono farafahakeliny olona 6 nandritra ny fanafihana tao amin'ny Moské Al Omari mba hanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana izay efa nanao ny toerana ho toeram-pivoriana sy hopitaly feno harena. Nitatitra ny televiziona Syriana eto amin'ny firenena fa andia-jiolahy...
Japana: Onagawa, ilay tany fonenako fahiny
Azia Atsinanana 25 Marsa 2011
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Horohorontany Japana 2011. Niala ny taniny tany Onagawa any amin'ny “préfecture” an'i Miyagi i @kombu_s, mpampiasa Ttwitter ka nifindra tany Sendai. Indro ny mombamomba azy: 現在、宮城県女川町で見てきた範囲のみの情報をツイートをしています。※ツイート履歴を確認してください。※　不安なのはとてもわかるのですが、私が見た範囲でしかわかりません。通ってない地区や個人の安否等はわかりません。車で第一保育所まで行き、総合体育館まで瓦礫の中を歩いて家族を迎えに行っただけです。 http://twitpic.com/photos/kombu_s Mandefa tweets momba ny zavatra hitako tany Onagawa aho izao, any amin'ny prefektioran'i Miyagi. Mba...
Syria: Mitohy Miha-Mahazo Vahana ny Hetsi-Panoherana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Marsa 2011
Ny Alatsinainy 21 Martsa 2011. mitohy ny hetsi-panoherana ao Daraa, any atsimon'i Syria, izay isian'ny tatitra milaza fa mpanao fihetsiketsehana dimy no maty omaly ary iray hafa androany.. Raha ny tati-baovao milaza fa nandoro tranom-panjakana avy eo ireo mpanohitra, ny mponin'ny aterineto sy ireo mafàna fo kosa manamafy fa ny tafi-panjakana no nandoro ireny trano ireny. Mandritra izany, maro ireo ao amin'ny Twitter no manamafy fa i Daraa no mety ho ny Sidi Bouzid an'ny Toniziana.
Haiti : Ny mpihira sa ny mpampianatra?
Karaiba 22 Marsa 2011
Araka ny vaovao ao amin'ny Twitter momba ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana Filoha am-pirenena androany ao Haïti, filaharan-be tao amin'ny birao fifidianana, tsy nahita ny anarany tao amin'ny lisi-pifidianana ireo mpifidy tao amin'ny Lycée Petion sy tao amin'ny Lycée Croix des Bouquets , toe-javatra izay efa nahatonga olàna tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ny...